चाेटपछि किन फर्कन सक्दैनन् खेलाडी ? - Khelpati
चाेटपछि किन फर्कन सक्दैनन् खेलाडी ?
आइतवार, चैत्र १६, २०७६ विश्वास थापा
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ, 'हिंड्ने मान्छे लड्छ'। लडेको मान्छे फेरी उठेर दौडिन सक्नु पर्छ ।
खेलाडी जीवन पनि त्यस्तै हो । चोट लाग्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । कारण उसको धेरै शारीरिक हलचल हुन्छ । चोट कतिबेला कसलाई लाग्छ त्यो थाहा हुँदैन ।
तर, चोट लागेपछि खेलाडीले खेलमा फर्किन विभिन्न उपचार गर्छन ।
प्रविधिको समयमा अहिले जस्तो सुकै चोट पनि छोटो समयमा निको हुने गरेको छ । तर, नेपालको अवस्था फरक छ ।
नेपाली खेलकुदको इतिहास हेर्ने हो भने चोटपछि नेपाली खेलाडीले खेलमा फर्किन निकै संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
विशेषत क्रिकेटमा, चोट बोकेका कमै खेलाडी खेलमा फर्किन्छन् र पुरानै लय समात्छन् । कतिपय खेलाडीको खेलमा फर्किन संघर्ष गर्दा गर्दै खेलाडी जीवन समाप्त हुने गरेको छ ।
यसले गर्दा खेलाडीलाई मात्र नभएर टिमलाई समेत असर पर्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली क्रिकेटले सन्तुलित ओपनिङ जोडीको खोजीमा करिब एक दर्जन खेलाडीको परिक्षण गरिसकेको छ ।
ओपनर सुवास खकुरेल घाइते भएपछि नेपालको ओपनिङमा गिरावट आएको थियो । अझै पनि नेपाल ओपनिङ खेलाडीको खोजीमा रहेको छ ।
कुनै खेलाडी घाइते हुँदा खेलाडीलाई मात्र नभएर टिमलाई समेत त्यसको ठुलो असर पर्छ । राम्रोसँग खेलाडीले पुनरागमन गर्न नसक्दा क्रिकेट संघ र खेलाडी आफैले गरेको लगानी तथा मेहनत खेर जाने अवस्था आउँछ ।
'म घाइते भएँ, ओपनिङ गर्ने विकेटकिपर आउन सकेका छैनन् । योर्कर किङ भनिने जितेन्द्र मुखिया घाइते भए मिडियम फास्ट बलर आउन सकेका छैनन् । अहिले सोमपाल घाइते छन्, उनको स्थाममा फास्ट बलर अलराउण्डर छैनन्,' घाइते जीवनबाट बिस्तारै खेलमा फर्किंदै गरेका सुवास भन्छन् ।
तर, नेपालमा खेलाडीको पुनर्स्थापनाका लागि उचित उपचार प्रविधिको अभाव हुनु समस्या रहेको सुवासको भोगाई छ ।
'खेलाडी घाइते भएर खेलमा फर्किन नसक्नु नेपालको सन्दर्भमा उचित रिहाब नभएर हो,' सुवासले भन्छन्, 'नेपालमा खेलाडीको लागि रिहाब छैन । जति छ, सबै सामान्य व्यक्तिको लागि छ । खेलाडी र सामान्य व्यक्तिको रिहाब फरक हुने गर्छ ।'
कुनै पनि चोटको तीन तह (ग्रेड) हुन्छ । खेलाडी वा व्यक्तिको चोट अनुसार त्यसको तह पत्ता लगाएर उपचार गर्ने गरिन्छ । तेस्रो तहको चोटलाई शल्यक्रियाको आवश्यक हुन्छ । पहिलो र दोस्रो तहको चोट रिहाब गरेर निको पार्न सकिन्छ ।
खेलाडीको हकमा, अपरेसन गर्दा डाक्टरले सामान्य व्यक्तिलाई जस्तै उपचार र त्यसपछिको विधि खेलाडीलाई सिकाउने गर्छन् । तर, खेलाडी सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक हुने र उसलाई छिटो निको भएर मैदान फर्किनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले खेलाडीले सामान्य व्यक्ति जस्तै आराम र समय लिन नहुने नेपाल क्रिकेट टिमका फिजियो बिक्रम न्यौपानेको बुझाई छ ।
सामान्य व्यक्ति र खेलाडीलाई एकै उपचार हुन नहुने बिक्रम बताउँछन् । खेलाडीका लागि सामान्य व्यक्ति भन्दा छिटो फिट हुने र खेलमा फर्किन अन्य व्यक्तिको भन्दा फरक उपाय अपनाउनु पर्छ ।
'शल्यक्रियापछि खेलाडीलाई यति दिन आराम मात्र गर्नु भनेर डाक्टरले सुझाउने गर्छन् । जुन मेरो अनुभबमा पुरै गलत हो,' स्पोर्ट्स अथुरिटि इण्डियामा काम गरेको अनुभब सुनाउँदै बिक्रमले भने, 'हाम्रो फोकस खेलाडीलाई जति सक्दो चाँडै खेलमा फर्काउने हो र खेलाडीको लक्ष्य समेत त्यही हो । खेलाडीको लागि टिम फिजियोले भनेको मान्ने कि सर्जनले भनेको मान्ने ? त्यो उनीहरुको बिचार हो ।'
'खेलाडीको लागि चोट निको गराउँदै उसको स्किल र फिटनेस मध्यनजर गर्दै हामीले रिकभरीको उपाय सिकाउने हो,' बिक्रम थप्छन्, 'तर डाक्टरले सामान्य व्यक्तिलाई जस्तै आराम र औषधि दिने गर्छन् । सामान्य व्यक्ति भन्दा खेलाडीको हकमा फरक उपचार हुनु आवश्यक हुन्छ ।'
फिजियो बिक्रमले उदाहरणको रुपमा पृथु बास्कोटालाई उल्लेख गरे । उमेर समूहमा उत्कृष्ट क्षमता देखाएका पृथुलाई भविष्यमा पारसको विकल्पको कप्तान समेत मानिएको थियो ।
'उसको (पृथु) घुँडाको चोट थियो, पुनरागमन गर्ने सकेनन् । किन यस्तो भयो ?' उनले भने, 'उनको रिहाबमा ढिलाई भएको हो कि ? प्रश्न जायज छ, यो प्रश्न अबको आउने खेलाडीमा हामीले हुन दिनु भएन ।'
सामान्य व्यक्ति र खेलाडीको उपचार एकै भएपनि उपचारपछिको समय महत्वपूर्ण हुने गर्छ । खेलाडीले खेलमा फर्किन उपचारपछि लामो समय रेष्टमा बिताउन नहुने फिजियो बिक्रमको बुझाई छ । खेलाडीले उपचारपछिको आराम समयमा डाइट, खुट्टाको समस्या भए खुट्टा बाहेक अन्यको व्यायाम गर्न छुटाउनु नहुने बिक्रम बताउँछन् ।
'विश्वमा हेर्ने हो भने जस्तो चोटपनि छोटो समयमा निको भएर खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन् । सम्भव त रहेछ नि । कसरी छ त सम्भव ? डाईट र आराममा समेत खेलाडीले सक्ने र मिल्ने अभ्यास गर्दै आफुलाई एक्टिभ राख्नु पर्छ,' बिक्रम भन्छन् ।
'उदाहरणको रुपमा खेलाडीको हड्डी भाँचीएको हो भने प्रयाप्त मात्रामा क्याल्सियम, भिटामिन डी, प्रयाप्त आरामसंगै उपयुक्त अभ्यासको जरुरत छ,' बिक्रम भन्छन्, 'खेलाडीले 'प्यासिभ रेष्ट नभई एक्टिभ रेष्ट' गर्नु पर्छ । राम्रोसँग यो पालना गर्ने हो भने सामान्य व्यक्ति भन्दा ७५ प्रतिशत छिटो खेलाडी ठिक हुन सक्छन् ।'
यस्तै, खेलाडी शारीरिक रुपमा फिटसँगै मानसिक रुपमा समेत फिट हुन जरुरी छ । खेलाडीले पुनरागमन गरेपछी चोट दोहोरिन्छ कि भनेर उ डराउन हुँदैन ।
'खेलाडीमा डर हुनु भएन । डर भनेको पूर्ण रुपमा निको नभएपछि आउने हो । गलत उपचार वा व्यायाम गरिएको पनि हुन सक्छ,' बिक्रमले थपे ।
यदि कुनै खेलाडीको ढाडमा समस्या देखियो भने ढाडकै कारण हो भन्नु नमिल्ने समेत उनले बताए । अन्य कुराको कारणपनि ढाडमा समस्या देखिएको हुन सक्छ । यस्तै कुरा पत्ता लगाउन क्यानले पहिलो पटक सबै खेलाडीको फुल बढी चेकअप गराएको थियो ।
खेलाडीको फिटनेस र चोट लागेको खेलाडीको रिकभरको लागि रिहाब महत्वपूर्ण हुन्छ । रिहाबको सामान तथा उपकरणहरु महँगो पर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म खेलाडीको लागि रिहाब खोलिएको छैन । जति छन् सबैमा सामान्य व्यक्तिलाई जस्तै उपचार गरिन्छ । तर सामान्य व्यक्ति भन्दा खेलाडीलाई फरक रिहाब हुन आवश्यक हुन्छ ।
लामो समयसम्म नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा रहेको कारण खेलाडीले सास्ती खेप्नु परेको थियो । महँगो खर्चमा खेलाडी आफै रिहाब जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
'क्यान नहुँदा आफ्नो तरिका र आफ्नो सामानले मात्र काम कर्नु पर्थ्यो । तर अहिले चाहिएको सामान क्यानबाट मगाउन सहज भएको छ,' आउने दिनमा काम गर्न सहज हुने आशावादी हुँदै बिक्रमले भने ।
वैज्ञानिक संसारमा प्रविधिसंगै आफु समेत अपग्रेड हुन जरुरी रहेको बिक्रम ठान्छन् । त्यसको लागि क्यानले आवश्यक सहयोग गर्नेमा पनि उनी विश्वस्त छन् ।
'जसरी ब्याटिङ कोचले आफुलाई अपग्रेड गर्ने गर्छन् त्यस्तै म पनि समयसंगै अपग्रेड हुन जरुरी हुन्छ,' उनले थपे, 'त्यसको लागि म आफ्नो तर्फबाट सक्दो गरिरहेको हुन्छु तर क्यानले समेत समय र आवश्यकता अनुसार तालिममा पठाउन जरुरी हुन सक्छ ।'
चोटबारे सुवास के भन्छन् ?
चोट लागेपछि नेपाली खेलाडी किन खेलमा फर्कन सक्दैनन् ?
हामीसँग प्रयाप्त प्रविधि छैन । एउटा टिमको ट्रेनर हुन्छ, टिमसँग हिड्नु पर्ने भएको कारण उहाँले हामीलाई (घाइते खेलाडी) समय दिन पाउनु हुन्न ।
चोटपछि खेलाडी खेलमा फर्किन कत्तिको गार्हो छ ?
एकदमै कठिन छ । खेलाडीको लागि रिहाब पाउन मुस्किल छ । जहाँ छ, सबै सामान्य व्यक्तिलाई जस्तै रिहाब गर्ने गरिन्छ । सामान्य मान्छेलाई गर्ने र खेलाडीलाई गर्ने रिहाब फरक हुन्छ र खेलाडीलाई अरु भन्दा छिटो निको बनाउने रिहाब गराउनु जरुरी हुन्छ ।'
चोटपछि खेलाडीलाई मैदानमा पुनरागमन गराउन के गर्नुपर्छ ?
नेपाल खेलकुदमा राम्रो सम्भावना भएको देश हो । अझ क्रिकेटमा नेपालले राम्रो छाप छाड्न सफल छ । नेपालले विश्वकप खेल्ने तथा क्रिकेटमा सपनाको बाटो हिड्नु छ भने खेलाडीको भविष्यमा अहिले देखिनै कदम चाल्नु आवश्यक रहेको छ ।
सरोकारवाला निकायले अब के गरोस् जस्तो लाग्छ ?
आर्थिक रुपमा खेलाडीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । सामान्य खेलाडी आफ्नो खर्चमा रिहाब जान नसक्ने हुनाले क्यानले आफ्नो आफै रिहाब राख्नु निकै आवश्यक छ । हरेक खेलाडीको विकल्प खोज्नु पर्छ । ब्याकअप खोज्नु पर्छ ।
चोटबाट फर्कने एक मात्र उपाय रिहाब भएको हुनाले अबको दिनमा क्यान, राखेप तथा सरकारले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ, खेलाडीको लागि छुट्टै रिहाब निर्माण गर्न जरुरी छ ।
दक्षिण अफ्रिका र इंग्ल्यान्डबीचको पहिलो एकदिवसीय स्थगित
भारतद्वारा अष्ट्रेलियालाई १ सय ६२ रनको लक्ष्य